Professional iPhone Photo Ọhazi ịhazi Photos on iPhone
> Resource> iPhone> Olee otú iji hazie Photos on iPhone (iPhone 6s gụnyere)
"M hụrụ n'anya iji m iPhone dị ka a igwefoto na-foto, karịsịa na-ewere foto nke nwa m. IPhone-eme ka ọ dịkwuoro m mfe na-foto ọ bụla n'oge ọ bụla. Ọ bụ oké. Otú ọ dị, mgbe a nso nke foto jupụtara na igwefoto mpịakọta , m nwere ike ghara inwe ha onwe elu ohere. Bụ n'ebe ọ bụla iPhone foto Ọhazi ka m jikwaa ndị a eserese. "
iPhone bụ n'ezie a ezigbo igwefoto na-photos. Otú ọ dị, iTunes adịghị enye enyemaka ọ bụla iji hazie foto na iPhone. Ọ na-syncs foto site na kọmputa na-iPhone. Na nke a, iji hazie foto na iPhone, ị ga-agbalị a ọkachamara iPhone foto Ọhazi ngwa. Ke ibuotikọ emi, m na-atụ aro ị na-agbalị Wondershare TunesGo. Ọ na-eme ebe iTunes dara mkpụmkpụ - ahazi foto na iPhone.
Download kasị mma iPhone Photo Ọhazi ngwa ịhụ ma ọ dị mma ma ọ bụ!
Cheta na: Ma Wondershare TunesGo (Windows) na Wondershare TunesGo (Mac) ikpe nsụgharị nwere ike ibudata ebe a. Na-esonụ, anyị na-ekwu banyere otú iji Wondershare TunesGo (Windows) - Photo Ọhazi maka iPhone iji hazie foto na iPhone.
Nzọụkwụ na-eji ndị kasị mma foto Ọhazi maka iPhone
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPhone na PC
Jiri iPhone eriri USB jikọọ iPhone na PC. Download, wụnye, na ẹkedori foto Ọhazi maka iPhone (Wondershare TunesGo). TunesGo ga-amata gị iPhone na-egosipụta ya ke akpan window.
Cheta na: Tupu imalite iji TunesGo, biko wụnye iTunes na PC gị na mbụ.
Nzọụkwụ 2. Iji iPhone Photo Ọhazi iji hazie iPhone photos
Pịa Photos n'akụkụ aka nri nke window. Na mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ igwefoto Roll, Photo Library, na foto albums. Ugbu a, i nwere ike ịhazi ndị a iPhone photos.
Pịa "Igwefoto Roll" ma ọ bụ "Photo Library"> Họrọ photos> Pịa "Hichapụ" ka ihichapụ iPhone foto ma ọ bụ pịa "Export ka" mbupụ iPhone photos na kọmputa.
Right-pịa a foto album, ị nwere ike ịnyegharị ma ọ bụ hichapụ ya.
Right pịa "Photo Library" iji họrọ "New Album", ị nwere ike ịmepụta a foto ọhụrụ album.
Na-ekiri ndị Video ịmụta otú hazie foto na ihe iPhone
Gbalịa Wondershare TunesGo - iPhone Photo Ọhazi.
Nyefee Video / Audio Pọdkastị si iTunes ka iPhone (iPhone 5s gụnyere)
Olee otú Naghachi Data si iPhone na mgbake mode
Olee otú Play WAV on iPhone
AVI Player maka iPhone: Olee otú Play AVI on iPhone